Gobolada News Agency » Sawir: Ninka Guursan Raba Gabadha Obama oo Diinta Islamka qaatay
Sawir: Ninka Guursan Raba Gabadha Obama oo Diinta Islamka qaatay
Qareenkii Kenyanka ahaa ee doonayay inuu guursado gabadha Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama Malia, ayaa qaatay diinta islaamka.
Felix Kiprono Matagei,oo aduunka caan ka noqda kadib markii uu ku dalbaday gabadha Madaxweynaha Mareykanka 50 Lo ah, 70 ido ah iyo 30 ari ah ayaa qaatay diinta islaamka.
“Waxaan qaatay diinta islaamka sanadkii 2012 gudaha masjidka Nairobi kuyaal ee Jamia Mosque kadib markii saaxiibadey ay wax badan iga tustay diinta, ilaa markaasna waxaan ahaa Muslim”ayuu Wiilkan usheegay Citizen oo laga leeyahay Kenya.
“Gabadhaas waxey laheyd qalbi wanaagsan, waxaana ay ka shaqeysay sidii ay iigu qancin lahayd inaan qaato diinta islaamka, waana yeelay fikirka aan isku badalay”.
Qareenkan ayaa sheegay in mudo sedex sano ah ay ku qaadatay inuu bulshada usoo shaaciyo inuu qaatay diinta islaamka maadaama uu xiligaas baranayay diinta Islaamka.
“Waxaan qaatay ashahaadka ilaa sanadkii 2012, mana dooneyn inuu hadalkaan iga baxo ilaa aan dhameeyo waxbarashada, hada sedex bil kaliya ayaa iiga harsan inaan dhameeyo fasalka, waa inaan shaaciyaa diinta aan haysto ee runta ah”.
Wiilkan oo horey loo oran jiray Kiprono ayaa sheegay in hada magaciisa uu yahay Adnan, magacan ayuu kasoo qaatay mid kamid ah qabiiladii dagi jiray bariga dhexe kana mid ahaa Qureysh.
“Magaceyga Waa Adnan”ayuu yiri qareenka oo hadalkiisa ku daray “Waan soomey ilaa markii aan diinta islaamka qaatay, sababtoo ah waa diinteyda, sidoo kale waxaan si wanaagsan ubartay quraanka maadaama uu yahay nolsoheyda islaamka.
Diinta Islaamka ayaa si weyn ugu fideysa caalamka oo dhan.